Ukubhengezwa koQhagamshelwano lweMathiriyeli: Ezinye zekhonkco kule webhusayithi zizikhonkco ezidibeneyo. Oku kuthetha ukuba ucofa ikhonkco kwaye uthenge into, umnini wale webhusayithi uya kufumana ikhomishini yokubambisana. Kungakhathaliseki ukuba, umnini wale webhusayithi ucebisa kuphela iimveliso okanye iinkonzo eziza kongeza ixabiso kubafundi. Umnini wale webhusayithi uveza oku ngokuhambelana ne-Federal Trade Commission's 16 CFR, Icandelo 255: Izikhokelo malunga nokuSebenza kweeNdawo zokuGqibela kunye nobungqina kwiNtengiso.
Le webhusayithi inokwamkela iifomu zentengiso yemali, inkxaso-mali, ufakelo oluhlawulelwayo okanye ezinye iindlela zembuyekezo.
Imbuyekezo efunyenweyo inokuphembelela umxholo wentengiso, izihloko okanye izithuba ezenziwe kule webhusayithi. Loo mxholo, indawo yentengiso okanye iposti ayinakuhlala ichongwa njengomxholo ohlawulweyo okanye oxhasiweyo.
Umnini/abanini bale webhusayithi banokuhlawulwa ukuze banike izimvo ngeemveliso, iinkonzo, iiwebhusayithi kunye nezinye izihloko ezahlukeneyo. Nangona umnini/abanini bale webhusayithi befumana imbuyekezo ngezithuba zethu okanye iintengiso, sihlala sinikela ngezimvo zethu ezinyanisekileyo, izinto esizifumeneyo, iinkolelo, okanye amava kwezo zihloko okanye iimveliso. Iimbono kunye nezimvo ezichazwe kule webhusayithi ngumbhali kuphela. Naliphi na ibango lemveliso, izibalo, ukowuti okanye olunye umelo malunga nemveliso okanye inkonzo kufuneka lungqinisiswe nomenzi, umboneleli okanye iqela ekuthethwa ngalo.
Le webhusayithi ayinawo nawuphi na umxholo onokuthi ubonise ukungqubana komdla.
I-bikehike.org ithatha inxaxheba kwiNkqubo ye-Amazon Services LLC Associates, inkqubo yentengiso edibeneyo eyilelwe ukubonelela ngeendlela kwiindawo zokufumana iimali zentengiso ngentengiso kunye nokudibanisa kwi-Amazon.com. IAmazon, ilogo yeAmazon, iAmazonSupply, kunye nelogo yeAmazonSupply ziimpawu zorhwebo zeAmazon.com, Inc. okanye indibaniselwano yayo.
Izithuba zeblogi zinokuqulatha amakhonkco eAmazon, okuthetha ukuba, ukuba ucofa kwaye uthenge Ngoku okanye ubhalisele inkqubo yeAmazon, ibikehike.org inokufumana ikhomishini. Oku akuyondleko eyongezelelweyo kuwe.